दशैँमा मासु त खाअाैं, तर होस् गराैं - IAUA
दशैँमा मासु त खाअाैं, तर होस् गराैं
ramkrishna September 20, 2017	तर होस् गराैंदशैँमा मासु त खाअाैं
दशैंलगत्तै फुड पोइजनिङ (खानाको कारण हुने विषाक्तता) भई अस्पताल धाउनेहरुको संख्या नेपालमा धेरै छ ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने त ?
नेपालमा भने मासुबाट जुका पर्ने र ब्याक्टेरिया सङ्क्रमण हुने बढी पाइएको छ । कहिलेकाहीँ बर्ड फ्लु जस्ता भाइरल रोगहरु पनि आउँछ । दशैंलगत्तै फुड पोइजनिङ (खानाको कारण हुने विषाक्तता) भई अस्पताल धाउनेहरुको संख्या नेपालमा धेरै छ ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने त ? मासुबाट रोग कसरी सर्छ त ?
भोजमा नेपाली खाना त यिनै हुन्, तर सफा र चिल्लो कम भएको नै खाअाैं ।
Previous Previous post: के हो दशै, कसरी शुरु भयो, बलिको महत्व के छ अनि पुण्य पाउने कसरी ?
Next Next post: रोगको कारण नबनोस् दशै